Maxkamad sare oo ku taallo Ingiriiska oo xukun kale ku ridday Jabuuti – Madal Furan
Hoy > Warka > Maxkamad sare oo ku taallo Ingiriiska oo xukun kale ku ridday Jabuuti
Maxkamad sare oo ku taallo Ingiriiska oo xukun kale ku ridday Jabuuti
Editor September 25, 2018 0
Madal Furan – Maxkamadda sare ee England iyo Wales ee magaalada London ayaa horay u sii wadayso go’aankii 31-dii bishii Agoosto ee 2018-ka, kaas oo ahaa in shirkadda dekadaha ee dawladda Djibouti (“PDSA”) ka mamnuucaysa in aysan faragalin ku sameyn maamulka dekedda Doraleh.
Kadib markii 14-kii bishii Sabteembar ee 2018-ka ay maxkamadda dhagaystay dacwadda, taas oo PDSA aysan soo xaadirin maxkamadda, balse maxkamadda ayaa amartay in ay sii socoto dacwada ilaa amar dambe.
Amarka maxkamadda sare ayaa daba socday ka dib markii PDSA ay joojisay heshiiskii ay shuraakada kula ahayd DP World, iyo qabashada shirka aan caadiga ahayn ee ay isugu yeertay hay’adda marsooyinka Jabuuti (PDSA) 9-kii bishan Siteembar, si loo beddelo agaasimeyaashii ay u soo magacawday shirkadda DP World Terminalka Kontaynarrada Dooraale oo ay labada dhinac shuraako ku ahaayeen.
Maxkamadda ayaa sidoo kale amar ku bixisay in ay khasab tahay in PDSA ay xaqiijiso isbedel kasto oo ay ku sameenayso dekedda Dooraale ay ku saleeyso qoondada heshiiskii sida wada jirka ah loo saxiixay.
Taasi oo micneheedu yahay, in dawladda ama PDSA aysan koontorooli Karin ama aysan heshiis la gali Karin shirkad kale iyadoo aan lala socodsiin shirakadda DP World.
DP World ayaa toddobaadkii la soo dhaafay xaqiijisay in ay horay u sii wadi doonto waddo kasto oo sharciga ku saleeysan si ay u difaacato qoondadooda dekedda Dooraale.
Madaxweyne Farmaajo oo taageero ka codsaday odayaasha Beesha Hawiye.
Dacwadda C/raxmaan C/shakuur oo saaka dib u furmaysa, iyadoo huwan weji siyaasadeed.
Madaxweynaha Koonfur Afrika oo aqbalay’ in uu is casilo